Woyanaha oo shir deg dega isugu keenay Wadaadada Diimaha Itobiya. | ogaden24
Woyanaha oo shir deg dega isugu keenay Wadaadada Diimaha Itobiya.
Jan 17, 2017 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in kooxda TPLF ay isugu yeedhay hogaamiye yaasha diimaha ee dalka Itoobiya iyagoo raadinaya bal in ay xal uun u helaan daminta kacdoonada.
Sida aan lawada socono kooxda TPLF ayaa geed dheer iyo mid gaabanba ufuushay sidii ay u damin lahaayeen kacdoonada mudada sanadka iyo badhka ah ka socda qaybo badan oo wadanka ay gumaystaan ah.
Kooxda ayaa isticmaashay awood kasta oo ay isleeyihiin kacdoonka waad kuxakamayn kartaan waxayna adeegsadeen taangiyo iyo diyaarado halka dilka, kufsiga, dhaca iyo xidhayguna ay ahaayeen kuwo aan lookala miidaan dayaynin.
Sidoo kale kooxda ayaa damacday in ay dhaqaale ku furfurto kacdoonka iyadoo dadwaynaha iyo hogaamiye yaasha qabiilada iyo kuwa mucaaradkaba ku beer jileecsatay in ay dhaqaale badan siin doonaan taas oo noqotay mid aan dhag jalaq loosiinin.
Dhinaca kale kooxda ayaa kacdoonada u adeegsatay qorshayaal dhinaca siyaasada ah hase yeeshee waxaa maalinba maalinta kadambaysa la arkayay qoomiyad horleh iyo koox hor leh oo kusoo biiraya kacdoonada.
Hadaba arintan cusub ee hogaanka diimaha ay isugu yeedheen ayaa umuuqata geela wadhaf malagu dayay mana jiro wax rajo ah oo laga qabo in ay xal uhelaan daminta kacdoonada oo ay wadaan dadwayne xoriyad doon ah.
Dhinaca kale dadka ay kooxdu shirka isugu keentay ayaa ah kaadir iyaga ushaqeeye waxaana lasoconay in hogaame yaashii diimuhu qaarkood ay xidhan yihiin halka kuwa kalana ay dalka kabaxsadeen.
Si kastaba ha ahaatee arintan ayaa umuuqata qof buka boqol utalisay mana jirto rajo laga qabo in xili xaadirkan laxakameeyo dadwaynaha cadhaysan.